Izithuthi - Mag Incredible
5 Ukungabaza okufanele ukucacise mayelana nekhithi yomzimba ye-Mitsubishi Starion
Imoto yezemidlalo ihlale ibukeka isezingeni futhi ingakholeki. Izinkampani eziningi zethula izimoto zezemidlalo ezinhlobonhlobo, futhi kuhlanyisa abathandi bezimoto zezemidlalo abasebasha. Empeleni, iMitsubishi yethula imoto yezemidlalo ebizwa ngokuthi iMitsubishi Starion ekuqaleni kwawo-'80s. Yimoto ene-turbocharged enamabhodwe amane...
Uhambo oluya e-USA: Imigwaqo Eyi-iconic engu-7 Ongayijabulela Ngemoto Eqashwayo
I-USA iyindawo enhle yohambo lomgwaqo. Izakhamizi eziningi nezivakashi ezivakashela kuleli zwe zichitha amaholide azo ukuze zidwebe umzila othakazelisayo futhi zizijabulele ngokwazo. Ukuhamba ngemoto eqashiwe kukuvumela ukuthi ulungise izinhlelo,…
Izinhlobo Zomzimba Wemoto: Iyiphi Engcono Kakhulu Kuwe?
Kunenani elikhulu lemibandela abashayeli abazikhethela ngayo imoto. Phakathi kwazo kukhona ukusebenza kweyunithi yamandla, uhlobo lokudlulisela kanye nentengo. Nokho, kunephuzu elilodwa elibalulekile elidinga ukunakwa okukhethekile. Lolu uhlobo lomzimba wemoto. Ngaphezu kwe…
Ukusuka eLondon Ngemoto: Izinto Ezi-3 Zokungena Emlandweni
ILondon ngokwayo iyidolobha elihle elinezinto eziningi ezikhangayo kulo. Phakathi kwehlathi likakhonkolo, ungathola izinto eziningi ezithakazelisayo neziyingqayizivele, ugcwaliswe ngesiko lakudala kakhulu futhi uthole okuningi okuvelayo okusha. Nokho, ngaphandle kwe…
Ukukhetha imoto yomndeni ohambweni lomgwaqo olunqamula i-US
Ziningi izimo empilweni yakho lapho udinga imoto enkulu kunaleyo ojwayele ukuhamba ngayo. Njengesibonelo, uhlela uhambo lomgwaqo lomndeni nezingane zakho kanye ne-grammy. Noma uphuphe uhamba nabangani ngempelasonto.…
Uhambo Lwemoto lwase-USA: Izinto Eziyisi-6 Okungafanele Uzikhohlwe Ekhaya
Ngakho-ke, uhlele ngokucophelela imininingwane ngayinye yohambo lwakho oluzayo: uthenge amathikithi endiza, wabhukha igumbi lehhotela, wakhetha umshwalense futhi ekugcineni wagodla ukuqashwa kwamaveni abagibeli abangu-7 ohambweni olukhulu lomndeni oluya e-USA. Yebo, imoto elayisha abantu abangu-7 ilungele ukuhamba nayo...
Umlingiswa Wezemidlalo: Izimoto Ezi-5 Ezinamandla Kakhulu Ezikhiqizwe e-USA
ISpain iyindawo enhle yokushayela imoto. Imigwaqo isezingeni eliphezulu, futhi ingqalasizinda yezokuthutha ilungele abahambi. Wonke umuntu ofika lapho unethuba lokuthatha imoto eqashisayo ye-Firefly esikhumulweni sezindiza iMalaga noma…
Izici Eziyinhloko Ze-ERP Software
I-ERP (Enterprise Resource Planning noma Business Resource Planning) ukuphathwa okudidiyelwe kwezinqubo zebhizinisi eziyinhloko zezinhlelo zekhompiyutha zenkampani, kanye nokuphathwa kwezinsiza, ikakhulukazi lezo eziphathelene nokuhlelwa kwempahla, ukukhiqiza, i-HR, nokubalwa kwezimali. Kuyindlela yokulawula futhi…
Amathiphu angu-5 Okwakha Ukusethwa Kwegeyimu Okukhulu Ekhaya
Kunezinhlobo ezimbili zabadlali emhlabeni. Abathanda imidlalo bese kuba nalabo abathanda imidlalo yevidiyo. Akunandaba ukuthi ungumdlali nje wokuzilibazisa ovamile noma omatasa kakhulu ngokudlala, unomdlalo osezingeni eliphezulu...
Amathiphu angu-3 Wokudlala Okunempilo
Akuwona wonke umdlali okhuluphele - Inkathi !! Njengoba nami ngingumdlali wegeyimu oqinile, ngihlala ngithola okuningi kwalokhu kuphawula okungajwayelekile okuthi amageyimu angaba nemiphumela emibi empilweni yakho. Abantu ikakhulukazi abangani bakho abangadlali bavame ukunikeza izeluleko ezilula ozozithola...
1 2 3 4 Olandelayo